waa maxay public admestaration
Started by sucaad, 21 Oct 2015
waaa maxay public admenstration?
abdirahmanbashe mohamed abdullahi Aflixi Bar ama Baro 1 other like this
cabdi hibo mohamed abdullahi 2 others like this
ainetta marajiid 3
shafici120 Mahamed hadiis nor Aflixi Bar ama Baro like this
abdi samed cartan 3
Waa maxay public administration?
Waxaan u bahanahy inan barto public administration marka sideen ku baran.karaa online ahaa mahali karaase online free ah
Waxaa jiro jaamacado bixiyo faculty-ga public administration online ahaan Google waxaad ku qortaa online public administration degree deetna results-ka kuu soo baxo ka baaro.
maamulka guud waa cilmi daraaseenaya guud ahaan horumarka iyo geedi socodka ummada, qaas ahaana waa dardargelinta iyo horumarinta umuuraha dowlda si loogu guulaysto ahadaafta siyaasadeed ee Xukuumadda.
Su,aal kale ayaan qabaa sideen isku diiwaan galin.karaa hadii aan rabo it free ah tusaale ahaan qeybta isdiiwaan galinta waan fahmi.la,ahay
Website-ka aad iska diiwaan galineeyso waa ineey lahaadaan qaab ku saacidi karo markaad isdiiwaan gaineeyso, link-ga soo dhig si laguu caawiyo
Axmed muse likes this